YouTube bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu weebụsaịtị n'ụwa nile nke ana achi achi na ọdịnaya na-abụghị nanị na-akọrọ ma ndị ọrụ nwekwara ike ele àgwà mkpebi nakwa dị ka àgwà. YouTube akaụntụ na-akwado mmachi formats n'èzí nke nke ọrụ na-enweghị ike bulite video kasịnụ n'ụzọ. Iji jide n'aka na na nsogbu ahụ bụ kpebiri ọ na-gwara ka ụfọdụ na ndị nkuzi na-agụ na zuru mere na onye ọrụ na-akawanye achọrọ ihe ọmụma.
QuickTime (MOV) faịlụ-apụghị uploaded YouTube
Ọtụtụ format nkwado nke YouTube na-enye ohere ọrụ iji na-enweta videos uploaded enweghị ihe ọ bụla hassle. onye ọrụ ga na-ekwukwa na MOV format bụghị viewable mgbe ọ na-abịa YouTube na e nwere ọtụtụ ihe metụtara ya. A ụda ikpe na gbaa ibé na ihe bụ nsogbu kọwara n'ikpeazụ kpebiri ga-aghọ na-esote nke a nkuzi na ihe niile dị otú ahụ ikpe na-adịkarị ibili si otu nke na na onye ọrụ ga na-eche afọ ojuju na uru mkpebi bụ ihe a na-nyere ma ọ bụrụ na nkuzi na-agụ ruo ọgwụgwụ.
A ikpe nwere ike ike na URL https://discussions.apple.com/thread/6677823 na maka ọdịnihu nmepe bụrụ na onye ọrụ chọrọ mgbe ahụ na eri nwere ike ịbụ nleta. The n'ozuzu nkọwa nke ikpe bụ dị ka ndị. Ịbụ mfe na ọdịdị ikpe ka amaghi ka ọtụtụ tech savvy ọrụ ka naanị layman.
Mgbe m na-aga Ekekọrịta> YouTube m ga-esi njehie nke na ọ pụghị ebipụta n'ihi na faịlụ a bụ ogologo oge karịa 15 nkeji.
E nwere YouTube akaụntụ na-ekwe ka videos ogologo oge karịa 15 nkeji, gụnyere m. Ọ ga-abụ oké ma ọ bụrụ na m nwere ike na-QuickTime ka m họrọ Share> YouTube na-enweghị na-a njehie.
MacBook Pro na Retina ngosi, OS X Yosemite (10.10)
E nwere ọtụtụ ihe na-metụtara nsogbu na onye ọrụ kwesịrị ịna-elekọta na mkpebi-agbaso. Ịnọgide na-isiokwu ọ na-gwara ka ego na formats na-akwado site na YouTube na-anya. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime ha:
The n'elu bụ ọdịyo nakwa dị ka video formats nke YouTube nkwado na ọ bụrụ na MOV format na-adịghị na koodu na ihe ọ bụla nke n'elu kwuru banyere formats mgbe ahụ ọrụ na onye ga-enwe ike bulite video na saịtị na ala na afọ ojuju. Ọ nwekwara ike kwuru na dị ka na-ebugote video na-YouTube mgbe converting kwesịrị ekwesị usoro. E nwere ọtụtụ iri puku convertors na dị online iji gosi na onye ọrụ ọkọkpọhi egwu results ma na-esote akụkụ nke nkuzi ga na-akụzi na-esi na-enweghị n'etiti ha na omume ga-ẹkenam:
Wondershare Video Convertor Ultimate maka Mac
The doro ngwaahịa bụ otu n'ime ndị kasị magburu onwe mepụtara ruo ugbu a nke mere na onye ọrụ ọkọkpọhi paramount results mgbe ọ na-abịa Ọkpụkpọ akakabarede. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime ndị e ji mara nke usoro ihe omume na zuru:
Ndị ọhụrụ 4k na Ultra HD format na-akwado site a dị ike software omume
The edezi ngwá ọrụ na e agbakwunyere bụ ike kacha ike otu onye mgbe ọ na-abịa usoro ihe omume nke yiri genre.
Usoro ihe omume na-eme ka o kwe omume n'ihi na onye ọrụ ibudata na ubi YouTube video nakwa
The n'ozuzu okirikiri nhọrọ ukwuu nke edezi ngwá ọrụ dị mfe ịghọta na ọbụna novice ọrụ nwere ike iji ya mfe enweghị ihe ọ bụla nke.
Onye ọrụ nwere ike na-enweta DLNA nkwado na gụgharia center nke ga-ekwe ka ha seamlessly enuba ka usoro mgbasa ozi dị iche iche ngwaọrụ ozugbo ha jikọọ na usoro.
Na-ebugote vidiyo na YouTube
Ozugbo video e converted onye ọrụ nwere ike ichere na ọ na-uploaded ka website mfe. ọbụna ma ọ bụrụ na video bụ ogologo oge karịa 15 nkeji saịtị ụkpụrụ jide n'aka na pụtara obibia e mere na-ebugote na-eme na ala na afọ ojuju dị ka ọ ga kewaa video na obere na obere akụkụ na ya na-eme ka n'ozuzu usoro mfe n'ihi na onye ọrụ na-eso
Olee otú bulite vidiyo si na QuickTime ọkpụkpọ ka YouTube
Usoro nke metụtara nke a bụ dị mfe ma na onye ọrụ kwesịrị iji hụ na ndị na-esonụ na-soro na-a gbaa ibé na ọrụ a na-arụzu ihe ịga nke ọma:
1. The video a ga-uploaded bụ na-egwuri site na QuickTime ọkpụkpọ dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
2. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị pịa curved akụ n'akuku play / kwụsịtụ njikwa na mgbe ahụ YouTube bụ-họọrọ si dropdown ndepụta iji jide n'aka na usoro okokụre kpamkpam na video na uploaded mfe
YouTube bụ a na saịtị nwere tọn data a na-adị kwa ụbọchị uploaded si n'akụkụ nile nke ụwa. Otu na-emetụta QuickTime na okwu nke subscriber isi na-amụba na bụla na-agafe n'ụbọchị. Ma ndị ụlọ ọrụ mere kwesịrị imekota na-etolite a n'elu ikpo okwu na-agwa onye ọrụ mbipụta na ruo mgbe ọ na-adịghị mere omume dị ka Wondershare Video Convertor Ultimate bụ ndị kasị mma o kwere omume ngwọta. Ọ bụ enweghị atụ omume na bụghị nanị multidimensional ma na-akwado onye ọrụ na zuru ke hour nke mkpa. Imeri hassles nke onye ọrụ bụ nnukwu echiche n'azụ a usoro mmepe. �
> Resource> QuickTime> Olee bulite QuickTime vidiyo na YouTube on Mac